သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့မှ (၁၇) ရက်နေ့အတွင်း သတိထားရမယ့် ရာသီဥတုသတိပေးချက် - Zeekwat Hot News
August 13, 20190541
မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်ပြိုကျမှုများ၊ ရေကြီးရေလျှံမှုများနဲ့ လူသေလူပျောက်များနေခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် ရာသီဥတုက ဆိုးရွားဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများစွာ ရှိနေခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်သူများကလည်း အရေးပေါ်ကယ်ယူနေကြပါတယ်။
Photo : Lwin Mg
သို့ပေမယ့် ရာသီဥတုအခြေအနေဆိုးရွားမှုများက ရပ်တန့်နေမှာမဟုတ်ဘဲ ဆက်လက်ဆိုးရွားဦးမယ်ဖြစ်တယ်လို့ မိုးလေ၀သပညာရှင်များကလည်း ကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်မှုများ လုပ်ပေးနေကြပါတယ်။ ပြည်သူများအားလုံးကလည်း မိုးလေ၀သသတင်းများကို မျက်ခြေမပျက် စောင့်ကြည့်နေကြပြီး သတိထားနေကြပါတယ်။
ထပ်မံပြီး ထွက်ရှိလာတဲ့ မိုးလေ၀သသတင်းအသစ်ကတော့ သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ကနေ (၁၇) ရက်နေ့အတွင်း သတိထားရမယ့် ရာသီဥတုသတိပေးချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“သတိပေးခြင်း (ခြောက်လှန့်ခြင်းမဟုတ်ပါ) ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ၁၃ရက်နေ့မှ ၁၇ရက်နေ့အတွင်း သထုံ ဘီးလင်း ကျိုက်ထို ညောင်လေးပင် ဒေသများ ရွာသွန်းမြဲပျမ်းမျှမိုးရေချိန်ထက် ၁လက်မကျော်(တစ်ရက်လျှင်) ပိုမိုရွာသွန်းနိုင်ပြီး ဖားအံ နောင်လုံ ဒေါ်လမ်း ရေပူ ပိုင်ကျံ လှိုင်းဘွဲ့ မြိုင်ကြီးငူ ရွှေဂွန်း ကမမောင်း ယင်းပိုင် ဒေသများသည် ရွာသွန်းမြဲ ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်ထက် ၂လက်မကျော်(တစ်ရက်လျှင်) ပိုမိုရွာသွန်းနိုင်ပါတယ် လက်ရှိစိုးရိမ်ရေမှတ်ရှိဒေသများအတွက် အထူးသတိထားကြဖို့ မေတ္တာဖြင့်မျှဝေလိုက်ပါတယ်…. 12/08/2019 at 4:24pm (MMT) SU SU SAN” ဆိုပြီး Su Su San ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က ရေးသားမျှဝေပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Photo : Su Su San
ရေဘေးသင့်နေကြသော မြို့များက ပြည်သူများအတွက် ပြည်သူလူထုအားလုံးက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသလို မေတ္တာများလည်း ပို့သနေခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်သူများသာမက အနုပညာရှင်များကလည်း ၀ိုင်းဝန်းဆုတောင်းနေကြပြီး ရေဘေးအလှူအတွက်လည်း အလှူငွေများ မတည်ပေးနေကြပါတယ်။
Source : Su Su San Facebook
မွနျမာပွညျအနှံ့အပွားမှာ မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးမှုကွောငျ့ တောငျပွိုကမြှုမြား၊ ရကွေီးရလြှေံမှုမြားနဲ့ လူသလေူပြောကျမြားနခေဲ့ပွီး ယနတေို့ငျ ရာသီဥတုက ဆိုးရှားဆဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ရဘေေးသငျ့ပွညျသူမြားစှာ ရှိနခေဲ့ပွီး ကယျဆယျသူမြားကလညျး အရေးပျေါကယျယူနကွေပါတယျ။
သို့ပမေယျ့ ရာသီဥတုအခွအေနဆေိုးရှားမှုမြားက ရပျတနျ့နမှောမဟုတျဘဲ ဆကျလကျဆိုးရှားဦးမယျဖွဈတယျလို့ မိုးလဝေသပညာရှငျမြားကလညျး ကွိုတငျသတိပေးနှိုးဆျောမှုမြား လုပျပေးနကွေပါတယျ။ ပွညျသူမြားအားလုံးကလညျး မိုးလဝေသသတငျးမြားကို မကျြခွမေပကျြ စောငျ့ကွညျ့နကွေပွီး သတိထားနကွေပါတယျ။
ထပျမံပွီး ထှကျရှိလာတဲ့ မိုးလဝေသသတငျးအသဈကတော့ သွဂုတျလ (၁၃) ရကျနကေ့နေ (၁၇) ရကျနအေ့တှငျး သတိထားရမယျ့ ရာသီဥတုသတိပေးခကျြပဲ ဖွဈပါတယျ။
“သတိပေးခွငျး (ခွောကျလှနျ့ခွငျးမဟုတျပါ) ၂၀၁၉ ဩဂုတျလ ၁၃ရကျနမှေ့ ၁၇ရကျနအေ့တှငျး သထုံ ဘီးလငျး ကြိုကျထို ညောငျလေးပငျ ဒသေမြား ရှာသှနျးမွဲပမျြးမြှမိုးရခြေိနျထကျ ၁လကျမကြျော(တဈရကျလြှငျ) ပိုမိုရှာသှနျးနိုငျပွီး ဖားအံ နောငျလုံ ဒျေါလမျး ရပေူ ပိုငျကြံ လှိုငျးဘှဲ့ မွိုငျကွီးငူ ရှဂှေနျး ကမမောငျး ယငျးပိုငျ ဒသေမြားသညျ ရှာသှနျးမွဲ ပမျြးမြှမိုးရခြေိနျထကျ ၂လကျမကြျော(တဈရကျလြှငျ) ပိုမိုရှာသှနျးနိုငျပါတယျ လကျရှိစိုးရိမျရမှေတျရှိဒသေမြားအတှကျ အထူးသတိထားကွဖို့ မတ်ေတာဖွငျ့မြှဝလေိုကျပါတယျ…. 12/08/2019 at 4:24pm (MMT) SU SU SAN” ဆိုပွီး Su Su San ဆိုတဲ့ အကောငျ့ပိုငျရှငျက ရေးသားမြှဝပေေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ရဘေေးသငျ့နကွေသော မွို့မြားက ပွညျသူမြားအတှကျ ပွညျသူလူထုအားလုံးက စိတျမကောငျးဖွဈနကွေသလို မတ်ေတာမြားလညျး ပို့သနခေဲ့ကွပါတယျ။ ပွညျသူမြားသာမက အနုပညာရှငျမြားကလညျး ဝိုငျးဝနျးဆုတောငျးနကွေပွီး ရဘေေးအလှူအတှကျလညျး အလှူငှမြေား မတညျပေးနကွေပါတယျ။